Sida ugu fudud ee aad ku heli karto shaqada aad jeceshahay
Home Aragti-doon Sida ugu fudud ee aad ku heli karto shaqada aad jeceshahay
Sidee ku heli kartaa shaqo aad jeceshahay, halkii aad ka shaqeyn lahay mid aadan rabin?
Shaqo raadinta waa caadi balse shaqada aad jeceshahay sidee ku heli kartaa? - UNSPLASH
Ka hadalka su’aal u dhiganta hal milyan oo dollar
Sida lagu ogaaday cilmi-baaris, qiyaastii 70% dadka kuma faraxsana shaqada ay hayaan. Sababtoo ah kala bar dadkaas waxay dareemayaan in shaqada iyo xirfaddooda aysan wax xiriir ah lahayn.
Haddaba taa waxay sababta in dad badan ay ka shaqeeyaan meel ay neceb yihiin ama ay qabtaan shaqo aysan dooneyn.
Haddii shaqadaada aad neceb tahay, ama aad dareemeyso in aadan ku faraxsanayn, haddaba keligaa kuma ahid arrintaas ee waa lagula qabaa.
Haddaba maxay dadka u qabtaan shaqo aysan jeclayn? Ma jirto sabab dhab ah, balse shaqo la’aanta oo badan iyo dhibaatooyiin dhanka dhaqaalaha ah ayaa sababa in dadka qaar ay ka shaqeeyaan meel aysan dooneyn ama aysan lahayn xirfaddeeda.
Waxaa sidoo kale jira dad aan si wanaagsan uga fakarin xirfadda ay dooranayaan marka ay jaamacadaha aadayaan, waxayna ku dambeeyaan meel aysan jeclaysan. Taas waxay u horseedeysaa in aysan wax horumar ah ka sameyn dhanka nolosha.
Haddaba, waa suuragal in shaqadaada aad jeclaato ama ugu yaraan aan ku faraxsanaato. Qodobbadan hoose akhriso:
Hoos u soo yara dhig heerka aad is gaarsiineyso
Waa arrin iska dabiici ah in aad noqoto qof aan jeclayn shaqadiisa.
Haddaba taa niyadda ha kuu qaboojiso.
Waa suuragal in aad baraha bulshada ku aragto dareenka ku saabsan in shaqada keli ah eek u anfaceysa ay tahay midda aad jeceshahay. Ama ku tilmaam waxa aad ka hesho.
Qabashada shaqo xad-dhaaf ah, dhaqanka wax soo saarka, rafaadka iyo dhibaatada, dadaal badan, qof shaqeynaya xilli kastaa – Dhammaan waa nalagu soo abaabiyay.
Hadda waxaa soo baxay in subaxa Isniinta aad noqoto qofka ugu shaqada fiican uguna firfircoon, haddii kale waad fashilmi doontaa.
Haddaba, taa run maaha.
Dadka waxay aad isugu mashquuliyaan shaqo uun. In ka badan 40 saacadood ayey isbuuc kasta kaa qaadataa.
Haddaba shaqo waa uun shaqada aad hayso balse ma ahan wax qeexaya shaqsiyaddaada.
Waa arrin iska wanaagsan haddii shaqada ay kuu tahay wax aad qoyskaaga ku quudineyso ama ay qeexeyso sida aad u noolaaneyso.
Iyadoo taa la eegayo, uma baahnid in aad nacdo shaqadaada. Waxaa jiro qaabab aad ku jeclaan karto shaqada aad hadda hayso iyo midda aad raadineysaba:
Meel ku qoro waxyaabaha aad mudnaanta siineyso
Waa arrin muhiim ah in aad arrimaha mudnaan kala siiso, melena ku qorato sida aad u kala horumarineyso. Ha ahaadaan wax ashaqad la xiriira ama kuwa kale.
Taa waxay kaa caawineysaa in waxa aad tiigsaneyso aad sii saadaalin karto. Balse waa in waxkasta ay si habeysan isugu kaa dul saran yihiin aadna ogtahay sida ay isugu xigxigaan.
Waxaad ku bilowdaan arriamaha aan laga wada hadleynin ee qasabka ah in aad sameyso.
Sidoo kale meel ku qor dhammaan xirfadaha aad leedahay
In aad ogtahay xirfadaha aad leedahay, melena ku qorato waa u muhiim in aad hesho shaqada aad jeceshahay. Haka tagin xitaa xirfadaha iska fudud iyo kuwa iska caadiga ah.
Haddii ay kugu adag tahay, waxaad garab weydiisataa qof kale, sida xaaskaaga ama saaxiibkaaga.
Waxaa suuragal ah in ay arkeen xirfado badan oo aad leedahay balse adiga aadan ka warhayn.
Haddii ay jiraan xirfado kale balse adiga aadan weli isku arkin, waxaad ku qortaa meelkale.
Diiwaanka noocaas ah wuxuu kaa anfacaayaa in aad raadsato nooca shaqo ee aad jeceshahay balse aadan waqti ku lumen shaqo aad neceb tahay.
Gaaridda hiigsigaaga waqti u yeel
Markan waxaad soo gaartay heerka aad ku diyaarineyso halka aad hiigsaneyso iyo xilliga aad dooneyso in meeshaa aad gaarto – xilliga dhow ama midka fogba.
Waa suuragal in yoolkaas uusan shaqada keli ah ku koobnayn – waxaa ka mid noqon kara, xilliga aad guursaneyso, ama guri iyo gaari iibsanayso. Inaad jaamacad ku biiri doonto xitaa waa in tiigsiga ka mid noqotaa.
Fikradda waa in ay noqoto halka aad doonayso in aad gaarto sanadaha soo socda – xirfad iyo nolol ba – Inshaa Allah.
Tusaale – shirkaddee dooneysaa in aad u shaqeyso? Shaqo noocee doonayesaa in aad ka qabato? Xirfadehee u baahan tahay in aad barato si aad yoolkaa ugu guuleysato? Dhammaan su’aalahan iyo kuwa kale is weydii.
Taa waxay kaa caawineysaa in aad si fudud oo degdeg ah ku hesho shaqada aad jeceshahay.
Balaari xiriirka iyo asxaabtaada
Marka aad ogaato xirfadahaaga iyo tiigsigaaga, waxaad u baahan tahay in aad dad kala duwan la xiriirtid oo la hadashid.
Dadka kala sheekeyso fursadaha jira ee la xiriira yoolkaaga iyo shaqooyiinka aad qaban karto.
Xiriirkaaga waa in uu dhaafsiisan yahay baraha bulshada – la hadal asxaabta iyo qoyska iyo xitaa dadka aad shaqo wadaagga tihiin.
Waxaad dadkaa oo dhan ku wargelisaa in aad raadineyso isbedel dhanka nolosha iyo shaqada ah, si ay kuu caawiyaan.
Waxaad raadisaa shirkad leh qiyamka aad tiigsaneyso
Waad u qalantaa in aad ka shaqeyso meel qiyam leh oo dadkana ay tixgeliyaan. Waana in aad garato in taageero aad haysato iyo in muhiim ay tahay in aad hesho shaqo aad jeceshahay.
Haddaba waa in aad jaranjarada kor u fuushaa oo aad eegtaa shirkadaha wanaagsan ee tixgelinaya xirfaddaada iyo horumarka aad tiigsaneyso.
Iska ilaali kuwa aan ogolayn horumarka shaqaalahooda ama xakameynta badan ku haya.
Baaritaan ku samee shirkadda ama meesha aad dooneyso in aad ka shaqeyso
Ogow ama xusuusnow in wareysiga ay kaa qaadayaan uu la mid yahay in adigana aad baaritaan ku sameyso shirkaddooda. Waxaad waqti gelisaa sidii aad xog badan uga heli lahaydshirkadda iyo shaqada.
Madaxda ku wareysaneysa, weydii su’aalo adag oo muhiim ah. Daacad ka noqo waxa aadan dooneynin in aad ka sameyso shaqada haddii ay ku siiyaan.
U sheeg waxa aad dooneyso – waxaadna weydiisaa in tusaalooyiin ay ku siiyaan oo la xiriira sida ay u taageerayaan waxa aad hiigsaneyso ee aad dooneyso in mustaqbalka aad gaarto.
IN aad hesho shaqada iyo xirfadda aad jeceshahay waxay qaadan karaan waqti yara dheer. Waana arrin iska caadi ah.
Mararka qaar waxaa dhici karto in tababar ahaan laguu siiyo shaqada, hadaba aqbal oo qaado, isuna diyaari sidii aad shaqo buuxda ku heli lahayd.
Xusuusnow, marna haka leexan yoolkii aad degsatay ee aad tiigsaneysay in aad gaarto; haddii aad ku aragto qeyb aan socon karinna, isku dey in aad midda xigta uga gudubto, laakiin ha dejinin hiigsiyo cusub.
Next articleKa hortagga bidaarta: Sidee ku heli kartaa 7-da cunto ee timaha u fiican